Shiinaha ALF-A Soo Saarista Mashiinka Mashiinka iyo Warshad | Iswaafajiyay
ALF-Mashiinka Calaamadaha Gawaarida
Mashiinka calaamadeynta ee dhalada wareega waa mid ka mid ah alaabooyinka la cusbooneysiiyay ee shirkaddayada. Waxay leedahay qaab-dhismeed fudud oo macquul ah, oo ay fududahay in la shaqeeyo. Awoodda wax soo saarka waa in si toos ah loo hagaajiyaa iyadoo loo eegayo cabirrada iyo astaamaha kala duwan ee dhalooyinka iyo waraaqaha sumadda. Waa lagu codsan karaa dhalooyinka kala duwan ee cuntada, daawada iyo waxyaabaha la isku qurxiyo, iwm. Hadday tahay mid calaamadeysan ama laba weji leh, calaamadda is-dhajinta ee daahfuran ama aan toos ahayn oo loogu talagalay dhalooyinka kiiska iyo dhalooyinka fidsan ama weel kale ayaa si dhab ah u qancin doona macaamiisha.
0-100 dhalo / saacaddii
20-45mm ama 30-70mm
Bidix → Midig (ama Midig → Bidix)
Qalabkani wuxuu ka tirsan yahay taxanaha mashiinka otomaatigga ah ee otomaatigga ah, oo ku habboon calaamadeynta dhinaca dhalooyinka fidsan, dhalooyinka wareega iyo dhalooyinka laba jibbaaran, sida dhalooyinka daawada, sharoobada, dhalooyinka shaambo ee fidsan, dhalooyinka wareega ee gacmaha lagu nadiifiyo iyo alaabada kale.
Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay mashiin kaligiis taagan, ama waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lagu daro qalab kale si loo sameeyo layn wax soo saar. Waxaa loo adeegsaday mashiin sireed, wuxuu daabacan karaa macluumaadka sida elektaroonigga ah kormeerka elektaroonigga ah, taariikhda soo-saarka, nambarka dufcadda, lambarka baararka daabacaadda, nidaamka baafinta lambarka baarka laba-geesoodka ah, iwm.
Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa shaqada kormeerka wax soo saarka si loo xaqiijiyo kormeerka muuqaalka iyo diidmada wax soo saarka, waxayna kordhin kartaa khadadka wax soo saarka otomaatiga ah iyo aaladda loo yaqaan 'robot palletizing' si loogu rido oo loo rido sanduuqa alaabada baakadaha ee hoos mara.
1. Qalabku wuxuu leeyahay adeegsi ballaaran, waana lagu hagaajin karaa si uu ula kulmo calaamadeynta iyo badeecooyinka is-isku-dhejisan ee qeexitaannada kala duwan iyo qaababka kala duwan.
2. Qalabku wuxuu leeyahay saxnaan calaamadeyn sarreysa. Qalabku wuxuu adeegsadaa matoorrada isteerinka ama matoorrada adeegga si ay u gudbiyaan calaamadaha, taas oo sax ah oo wax ku ool ah, waxayna leedahay nashqad u gaar ah naqshadeynta hagaajinta si loo hubiyo in calaamadaha aysan saameyn ku yeelan leexashada bidix iyo midig inta lagu jiro hawlgalka.
3. Qalabka waa mid adag oo adkeysi leh, qaabeynta ayaa loo qaabeeyey oo lagu soo saaray qalab tayo sare leh, iyo habka seddex-bar hagaajinta ayaa la qaatay si loo hubiyo soosaarka xasiloon ee qalabka.
4. Waxqabadka qalabku waa mid la isku halleyn karo, qaybo dibedda laga keenay ayaa la isticmaalay, oo tayada la hubo oo lagu kalsoonaan karo.
5. Isku-hagaajin fudud iyo qaab-dhismeed bini-aadamnimo ayaa qalabka ka dhigaya mid leh xorriyad sarreysa oo sarreysa, iyo beddelaadda alaabada kala duwan waa mid fudud oo dhakhso leh.
6. Qalabka si caqligal ah ayaa loo xakameeyaa, iyadoo la adeegsanayo raadraaca tooska ah ee sawir-koronto, oo aan lahayn calaamadda kabidda dhalada, waxqabadka toosinta calaamadda tooska ah, si looga hortago daadashada ama qashinka.
Hore: ALC Taxanaha Mashiinka Mashiinka Kabaha
Xiga: Taxanaha SL Kaarka Kaabsoolka Elektaroonigga ah
ALC Taxanaha Mashiinka Mashiinka Kabaha
ALFC Taxanaha Auto Liquid Buuxinta Oo Capping Mon ...
ALE Taxanaha Auto Eyedrop Buuxinta Monobloc
ALF-60 Rotary-Type Liquid Buuxinta, Xirashada Iyo ...
ALF Taxanaha Mashiinka Buuxinta
Automatic Prefillable Glass Syringe Buuxinta ...